Wararka - mitirka aagga dhirta dhirta ee u dhigma baahiyaha horumarinta ee saxsanaanta beeraha
Mitirka aagga caleemaha dhirta u dhigma baahiyaha horumarinta ee saxsanaanta beeraha
Waxaan ognahay in cabirka aaga caleenta uu xiriir la leeyahay xoojinta sawir qaadista, sidoo kale wuxuu ka tarjumayaa ka faa'iideysiga tamarta qorraxda, isha tamarta aasaasiga ah. Waxaan sidoo kale hagaajin karnaa aagga caleenta si aan kor ugu qaadno waxtarka isticmaalka biyaha ee dhirta cagaaran, laakiin sidoo kale waxay leedahay awood gaar ah oo ay ku nuugi karto bacriminta, marka aan kor ku soo sheegno waxaan arki karnaa in cabbirka aagga caleen weli loo baahan yahay. Adoo hagaajinaya aagga caleenta, waxaan hagaajin karnaa waxtarka isticmaalka biyaha, hagaajinta waxtarka guud ee isticmaalka bacriminta, ugu dambeyntiina waxaan ku guuleysaneynaa dhalid sare. Isla mar ahaantaana, waxay kaloo leedahay qiime tixraac muhiim u ah qiyaasidda saxda ah ee musiibada cayayaanka.
Qiyaasta aagga caleen aad ayey muhiim u tahay in aaladaha la xiriira cabirka aagga caleenta iyagana sidoo kale fiiro gaar ah loo yeesho. Mitirka aagga caleen ayaa cabbiri kara aagga dusha caleen qaab kasta oo aan caadi ahayn, midab kasta, dhumuc kasta iyo qoyaanka. Xawaaraha cabbirka waa mid deg deg ah, waqtiga lagu cabirayo aagga dusha sare ee daab kasta waa in ka yar 1 ilbidhiqsi ka dib bilowga iyo kuleylka. Xogta la cabiray ee aagga caleenta ayaa lagu keydin karaa goobta oo waxaa loo soo diri karaa PC. Mitirka aagga caleenta wuxuu leeyahay shaqada waqtiga iyo taariikhda, kaasoo maamuli kara xogta hadba waqtiga.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in caleemaha dhirtu sidoo kale leeyihiin awood ay wax ku nuugaan, ku bacrimiyaan meelaha ka baxsan xididdada, kuna buufiyaan sunta cayayaanka iyo doogga. Intooda badani waxay ku dhex milmaan dhirta iyada oo loo marayo daloolada yaryar ee dusha caleenka. Intaa waxaa dheer, caleemaha dhir yar waxay leeyihiin shaqada taranka, sida Begonia, oo badanaa lagu faafiyo jarista, Doorka caleemaha lama iska indho tiri karo. In geeddi socodka koritaanka dhirta, waa inaan hubinaa cabirka aagga caleen iyada oo loo marayo aaladda cabirka aagga.
Isticmaalka qalabka xirfadleyda ah ayaa si weyn u wanaajin kara waxtarka cabbirka, sababtoo ah waxaad u baahan tahay oo keliya inaad riixdo badhanka, isla markiiba waad heli kartaa aagga cabbirka la cabbiray. Saxsanaanta habka ayaa ka sarreeya tan habka qalabka aan qalabka ahayn. Tani sidoo kale waa baahida loo qabo horumarinta beeraha saxda ah iyo beeraha casriga ah.